, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सचिवालयका सबैले दिए राजीनामा
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सचिवालयका सबैले दिए राजीनामा
कार्तिक २३, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयका सल्लाहकारहरु तथा सहयोगीहरुले राजीनामा दिएका छन् । शुक्रवार प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयमा रहका सबैलाई बोलाएर राजीनामा गर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएसँगै सल्लाहकार समूहका पदाधिकारी र स्वकीय सचिवालयका पदाधिकारीले आज शनिवार राजीनामा दिएका हुन् ।
राजीनामा दिनेमा मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई, जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युत मैनाली, प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्याल, प्रमुख स्वकीय सचिव इन्द्र प्रसाद भण्डारी, सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अली लगायतका सचिवालयका पदाधिकारी रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रहेका राजेश बज्राचार्यले भने राजीनामा दिनु नपर्ने भएको छ । उनी सचिवालयमा अवैतनिक भएकाले राजीनामा दिनु नपर्ने भएको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पार्टी नेता कार्यकर्तामाथि नै असहिष्ठु बनेको र प्रधानमन्त्रीलाई गलत विफ्रिङ गर्ने गरेको भन्दै सचिवालयको आलोचना हुने गरेको थियो । सचिवालयका सबै सदस्यलाई राजीनामा गर्न लगाउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । सरकारको काम कारवाही उत्साहजनक नभएको भन्दै आलोचना बढेपछि ओलीले सरकारको कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउने गरि कदम अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालय र सल्लाहकारको पार्टीभित्र चर्को आलोचना भएको थियो । पार्टीभित्र शीर्ष नेताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ ढंगले काम गर्न चाहेका छन् । ओलीले केही समयअघि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने संकेत समेत गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई सहज बनाउन भन्दै सचिवालयका सबै सदस्यले राजीनामा दिएका हुन् ।
ग्रान्डी अस्पतालमा २४ घण्टामा दुईपटक मिर्गौलाको डायलासिस गरेर बालुवाटार फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले फरक ढंगले काम अघि बढाउन चाहेका छन् । मिर्गौलाको डायलाइसिस गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो केही दिन यता सक्रिय देखिएका छन् ।